လူသတ်မှုရာသီနှင့်အပိုင်း (၆) အပိုင်း ၁၂ မှ WTF အခိုက်အတန့် ၅ - တီဗီ
လူသတ်မှုရာသီနှင့်အပိုင်း (၆) အပိုင်း ၁၂ မှ WTF အခိုက်အတန့် ၅
လူသတ်မှုဖြင့်မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း - SCAD အတွက် Catrina Maxwell / Getty Images မှဓာတ်ပုံ
အဆိုပါမှော်ရာသီ2hulu အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
Disney Plus သတင်း။ ။ ၂၀၂၀ ဇွန်လအတွက် Artemis Fowl ဖြန့်ချိမည့်နေ့ ပြင်ပဘဏ်များသည်သင်၏နောက်လာမည့်ဆယ်ကျော်သက်ဒရာမာသည် Netflix အကြောင်းစိတ်စွဲလမ်းရန်ဖြစ်သည်
လူသတ်မှုရာသီ (၆) ဖြစ်ရပ် (၁၂) နှင့်မည်သို့ဝေးဝေးနေရမည်နည်း။ ဤတွင်ယခုအပတ်မှအကောင်းဆုံးအချိန်လေးအချို့ကိုဒီမှာ။
၏ယခုအပတ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ အများဆုံးပြင်းထန်သောတစ်ခုဖြစ်သည်။ Annalize သည်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းခံလိုက်ရသည်၊ ဖရန့်ခ်သည်အကောင်းဆုံးကိုလုပ်ဆောင်သည်။ Michaela နှင့် Connor တို့သည် FBI နှင့်သဘောတူညီမှုများနှင့်အတူသူတို့ပြုမိခဲ့သည့်ထိခိုက်မှုများကိုကုစားရန်ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ဤဇာတ်လမ်းသည်မော်ကွန်းတင်သောအခိုက်အတန့်များနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးအချို့မှာမူအခြားအရာအားလုံးအပေါ်တွင်မူတည်နေသည်။
ယခုအပတ်၏အကြီးမားဆုံးတုန်လှုပ်စေသောတစ်ခုမှာဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေ Annalise ရဲ့လူသတ်မှုအမှု၌စားပွဲပေါ်မှာအပေါ်သေဒဏ်ထားသောဖြစ်ခဲ့သည်။ Annalize ထောင်သို့သွားခြင်းသည်သူမဖုံးကွယ်ထားသည့်အရာများအတွက်အမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော်လည်း၊ သူကိုယ်တိုင် Annalize အပါအ ၀ င်မည်သူမျှအစိုးရကသူမအားသေဒဏ်ချမှတ်ရန်ရှာလိမ့်မည်ဟုမထင်ခဲ့ပါ။ ကံအားလျော်စွာ Annalize is Annalize ဖြစ်ပြီး Tegan သည်သူမ၏ရှေ့နေဖြစ်ပြီး Annalize ပြစ်ဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်သေဒဏ်ကိုကျခံနိုင်ခဲ့သည်။
Xavier Castillo Nate ရဲ့အဖေအသတ်ခံရပြီး Laurel ပျောက်ကွယ်သွားပြီးကတည်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးကိုကျော်လွှားနေချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးမှာသူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုဒီအဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ အက်ဖ်ဘီအိုင်အေးဂျင့် Pollock အားအမြတ်ထုတ်နေစဉ်တွင်ဖရန့်သည် Xavier ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖရန့်ခ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့်နှိပ်စက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Xavier သည် FBI နှင့် Annalize ကိုဆန့်ကျင်။ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသူသိချင်ခဲ့သည်။ သူဟာသူလာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရတဲ့အခါ Xavier ကနေ Nate ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုမျှအဘယ်သူမျှမမျှော်လင့်ထား Xavier Nate ရဲ့အဖေကိုသတ်ဖို့ဝန်ခံပြီးနောက် Nate သူ့ကိုသတ်ကြ၏။ ဤသည် Nate ရဲ့ဒုတိယလူသတ်မှုဖြစ်ပြီး ... သူကိုရပ်တန့်နိုင်သလဲ ကျနော်တို့ Nale ကိုလူသတ်မှုမကျူးလွန်မီစီးရီးနိဂုံးမတိုင်မီပြန်လည်ရရှိနိုင်မည်လား။
အကြားတစ်ရာသီ3ရှိသေး၏
3. Annalize တစ်ဖန်မှတဆင့်လာပါတယ်
Tegan Annalize သေဒဏ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မဟုတ်သေချာစေရန်သူမ၏တင်းပါးကိုပယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်, ကနောက်ဆုံးမှာ Annalise ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုစားပွဲကချွတ်ယူစေခြင်းငှါ, နောက်ဆုံးမှာ Annalise ရဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှု သူမဆုံးရှုံးတော့မည့်အချိန်တွင် Annalize မည်သူမျှမျှော်လင့်မထားသည့်သက်သေအထောက်အထားများကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Michaela နှင့် Connor တို့သည်အက်ဖ်ဘီအိုင်နှင့်သူတို့၏သဘောတူညီမှုနှင့်အက်ရှာ၏သေခြင်းတွင်အက်ဖ်ဘီအိုင်၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏အားပြောဆိုရန်လာသည့်ဖြစ်ရပ်အစောပိုင်းတွင် Annalize ကသူတို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဘုတ်အဖွဲ့အဘို့ထိုမှတ်တမ်းတင်ကစားကြောင့်သူတို့ကိုသေဒဏ်ပေးဆန့်ကျင်ဆုံးဖြတ်စေတယျ။ သူမ၏ ဦး ထုပ်မှတစ်ခုခုဆွဲထုတ်ရန် Annalize ကိုအမြဲရေတွက်နိုင်သည်။
၄။ Michaela နှင့် Connor အဖမ်းခံရသည် (ထပ်မံ)
ဒီအသံသွင်းမှုဟာ Annalize အတွက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် Michaela နဲ့ Connor တို့အတွက်တော့မကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့တယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးပြီးနောက်, FBI ကပိုမေးခွန်းများအတွက်သူတို့ကိုယူ Michaela နှင့် Connor ရဲ့အိမ်တံခါးပေါ်တက်ပြသခဲ့သည်။
သူတို့ဟာ Annalize ကိုပြောပြီးသူတို့သိထားတာတွေကိုပြောပြခြင်းအားဖြင့်သူတို့သဘောတူညီမှုကိုချိုးဖောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် FBI ကသူတို့အတွက်လာပေးခဲ့တယ်။ လာမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မည်။ အခြားဘာမျှမပါလျှင်, Oliver သည်သူ၏ဘောင်းဘီကိုချွတ်စိုးရိမ်လိမ့်မည်!
5. Vivian ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်
အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲအခြားဂန္နှင့်အတူအဆုံးသတ်ခဲ့သည် လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ တောင်ကြီးမြို့။ Vivian, ဂါဗြေလ၏မိခင်, Annalise ရဲ့အရပ်သို့ရောက်လာ။ , သူတို့ဟန္န, ဆမ်ရဲ့အစ်မအကြောင်းပြောဆိုရန်စတင်ခဲ့သည်။ ဟန္နသည်သူမအားအဘယ်ကြောင့်ဤမျှမုန်းတီးကြောင်း Annalize သိလားဟု Vivian ကမေးခဲ့သည်။ သူမကမနှင့် Vivian ရဲ့ပြန်ကြားချက်ဟာစိတ်ကူးစိတ်သန်းဖို့အများကြီးထွက်ခွာကြောင်း Annalise ရဲ့အဖြေကိုအပေါ်အခြေခံပြီးရှင်းပါတယ်။
ဟန္နနဲ့ဆမ်ကြားကဖြစ်ပျက်မှုကြောင့်ဟန္နဟာ Annalize ကိုမုန်းတီးတယ်လို့သူမကပြောပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? သူတို့တစ်တွေရန်ပွဲသို့ရောက်ခဲ့သလား သူတို့စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့သလား ပိုဆိုးတာကပိုဆိုးလား။ ကျနော်တို့ထွက်ရှာတွေ့မှလာမည့်ဇာတ်လမ်းတွဲစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ဆက်စပ်ပုံပြင်:ယခုအချိန်တွင် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ်များရှိသည်
လူသတ်မှုနှင့်အတူမည်သို့ဝေးရနိုင်ပုံ 10 p.m. မှာကြာသပတေးနေ့ထုတ်လွှင့ ABC ရုပ်သံအပေါ်။
၏ယခုအပတ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပေါ်တွင်သင်၏အကြံအစည်ဘာတွေလဲ Murde နှင့်အတူဝေးရရန်မည်သို့မည်ပုံ r? ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ
shadowhunters ဇာတ်လမ်းတွဲ3လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ
Batman Netflix အပေါ်စတင်နေသည်
bloodline ရာသီ3ဖြန့်ချိသည်